डाक्टर भएर पनि बिरामी भएको तँ! :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डाक्टर भएर पनि बिरामी भएको तँ!
डा समिर लामा शुक्रबार, जेठ २८, २०७३, १७:५३:००
१००, १०१ डिग्री हुदैं बढ्दै गएको ज्वरो १०४ सम्म पनि पुग्यो।
चिसो लागेर काम्न शुरु हुँदा काठमाडौंको पुसमाघको जाडो सम्झाइदिन्थ्यो र दुईटा सिरकले पनि ज्यानमा तातो सञ्चार गर्न सक्दैनथ्यो। अनि जाडोमा कक्रक परेर सिरक ओडेझैं गरेर काम्यो, बस्यो र सह्यो। पानीपट्टी लगाए घट्छ कि भनेको तर हाइपोथालामसको तापक्रम केन्द्रमा शरीरको तापक्रम कति पुर्याउने भन्ने फिक्स भएपछि कसैको केही नलाग्दोरहेछ क्यारे। पानीपट्टी लाएपछि ज्वरो १०१ बाट बढेर १०३ डिग्री पुग्दा मेरी बहिनीले पनि अचम्म मानेकी थिइन्। काम्ने र जाडो हुने अवस्था सकेपछि गर्मी हुने बेला शुरु हुन्थ्यो।
१०४ पुग्दा त यति गर्मी हुन्थ्यो कि भनेर साध्य छैन, कपाल तातो, फेरिरहेको सास तातो, सबैकुरा तातो। लाग्थ्यो– म कुनै तातो तावामा बसिरहेको छु। एक डेढ घण्टा यस्तो रहेपछि ज्वरो घट्न शुरु हुन्थ्यो र त्यससँग यसरी पसिना बग्थ्यो कि मानौं पसिनामै डुबिन्छ। निथ्रुक्कै भिजाउँथ्यो पसिनाले र शरीरको तापक्रम बिस्तारै सामान्य तर्फ आउथ्यो। यसरी सकिन्थ्यो ज्वरोको भाग– १। यस्ता भाग दिनको २ चोटीसम्म झेल्नुपथ्र्याे। कहिले आउथ्यो ठेगान हुन्थेन, कहिले रातको १–२ बजे नि आउँथ्यो, कहिले दिउसोमा पनि। र, यो क्रम औषधी गर्दागर्दै पनि ११ दिनसम्म चलिरह्यो।
लौ, बिरामी हुँदाको अनुभव लेख्छु भनेर बसेको ज्वरोको विवरण पो दिँदै बसेछु। बिरामी हुँदा यो भयो, त्यो भयो भन्दा पनि बिरामी भएर बस्दा, अस्पतालमा जाँच्न जाँदा, आफ्नो उपचार गर्दा आफूले अनुभव गरेका, मनमा लागेका केही कुराहरु चाँही यहाँ लेख्न लागेको छु।
१) बिरामीलाई जति सजिलोसँग ‘सन्चो भैहाल्छ, नआत्तिनु’ भनेर हामी डाक्टर भन्छौं नि, आफैं बिरामी हुँदा थाहा हुँदोरहेछ, ती शब्दहरुमा भावना छैन, तीनमा केयरको भाव छैन भने ती त फगत शब्दहरु मात्र लाग्दॊरहेछन्, जसले बिरामीलाई केही सहयोग गर्दैनन्। बिरामीलाई ‘तपाईंको लागि म छु, मैले तपाईंलाई राम्रोसँग जाँच गरेको छु र आफूले जानेको आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म तपाईंको उपचार गर्नेछु’ भन्ने विश्वास दिलाउनु भनेको धेरै ठूलो कुरा रहेछ। यदि तपाईंले उपचार गरिरहेको बिरामीले तपाईंमाथि विश्वास गर्दैन वा भनौं तपाईंले बिरामीको विश्वास जित्न सक्नुहुन्न भने तपाईं औषधीको थुप्रो मात्र दिने ुक्वाक भन्दा केही फरक हुनुहुन्न। त्यसोभए बिरामीको विश्वास कसरी जित्ने त? सजिलो छ – बिरामीसँग कुरा गरेर, बिरामीलाई आफ्नो कुरा भन्ने समय दिएर, विरामीलाई समय लिएर राम्रोसँग जाँचेर, उपचारमा गरिने कुराहरु, जाँचहरु, हुनसक्ने जटिलताहरु बारे छलफल गरेर। यी सबै गरेपछि मात्र डाक्टरले ‘ूनआत्तिनुहोस्, सन्चो हुन्छ’ भन्नुको अर्थ हुन्छ।
२ ) डाक्टरहरुको पनि आफ्नै खालका सिमितताहरु हुन्छन्। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु– डाक्टरहरु पनि भगवान होइनन्। उनीहरुले पनि पढेको जानेको अनुभवका आधारमा, उपलब्ध औजार उपकरण अनुसार उपचार गर्ने हो, जादुको छडी घुमाउने होइन। तर, हामीकहाँ विरामीलाई यस्तरी अस्पताल कुदाइन्छ मानौं त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै सबै आफैं ठिक भैहाल्छ। तर, त्यसो हुदैंन। डाक्टरले गर्ने भनेको बिरामीसँग समस्याका बारेमा कुरा गर्ने, जानकारी लिने, उसलाई जाँच गर्ने, तत्कालको उपचारका लागि औषधी लेख्ने, रोग पत्ता लगाउनका लागि रगत, पिसाबका जाँचहरु आदि गर्ने, हुनसक्ने रोगको बारेमा जानकारी दिने र ठिक हुनका लागि शुभकामना दिने। बस्,यत्ति हो। रोगसँगको लडाईं त बिरामी आफैंले लड्नुपर्छ, त्यसका लागि हौसला बढाउने काममा उसको परिवार, नजिकका आफन्त र साथीभाई राम्रो भूमिका खेल्न सक्छन्। त्यसैले जादुको आशा राखेर पुर्याउने बित्तिकै डाक्टरले हेरेर ठिक भैहाल्ला भनेर अस्पताल कुदाउँदा पनि निराश हुनुपर्ने हुन्छ।
३) उपचार भनेको औषधी मात्र होइन रहेछ। बिरामी भयो भने यो रोग लागेको रहेछ, ल यो औषधी खाने, ठिक भैहाल्छ। प्रायः यत्तिमै सकिन्छ, हामी डाक्टरहरुले गर्ने उपचार। तर, उपचार भनेको औषधी मात्र हुँदै होइन र यो डाक्टरले मात्र गर्न सक्ने कुरा पनि होइन। बिरामी अवस्थामा बिरामीको सेवा, बिरामीलाई सहयोग, औषधी खुवाउने, दिने आदिमा नर्सहरुको र बिरामीका परिवारको ठूलो हात हुन्छ, जुन बाहिर देखिदैन र धन्यवादका पात्र प्रायः डाक्टरहरु मात्र हुने गर्छन्। म एक्लो हुँदा आफैंले पकाएर खाएर, औषधी पनि खाएर बस्नु र बहिनीले कोठाका सबै काम गरिदिएर, ज्वरो आएको बेलामा पानीपट्टी लगाइदिनु र पछि घरैबाटै आमा आएर सबै कामको जिम्मा लिनु आदिले म ठिक हुनुमा आकाश–जमीनको फरक पारेको छ। म औषधीले मात्र ठिक भएको होइन, म ठिक हुनुमा आमाको स्याहार, बहिनीको माया र साथीहरुको सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले उपचारमा औषधीको जति भूमिका हुन्छ, त्यतिकै भूमिका बिरामीलाई गरिने हेरचाह, समयमा औषधी दिने, ठिक हुनसक्छु भन्ने विश्वास दिलाउन सक्ने व्यवहार, माया, सहयोगको पनि हुन्छ। बिरामीको उपचारको टिम लिडर डाक्टर होला तर टिममा हरेक पात्रको आफ्नै तर महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र त्यस अनुसारको उनीहरुले सम्मान पनि पाउनुपर्छ। जुन हाम्रो समाजमा अलि कमै देखिन्छ।
४ ) डाक्टरहरुले प्रायः आफ्नो लागि औषधी किन्छन् जस्तो लाग्दैन। यताउता गरेर एमआरहरुबाट चाहिने औषधी निकालिरहेका हुन्छन्। मैले नि पहिले सानोतिनो बिरामी हुँदा, ग्यास्ट्राइटिसका औषधीहरु एमआरहरुबाट नै लिने गरेको थिएँ। तर यसपालीको उपचारमा प्रयोग भएका एन्टीवायटिकहरु (सेफ्ट्रायक्जोन, एजिथ्रोमाइसिन) आफैंले नै किनियो। अनि थाहा भयो औषधीहरु कतिको महंगो हुँदा रहेछन्। दुई हप्ता बिरामी भएर औषधी मात्र किन्दा त यस्तो खर्च हुन्छ भने काठमाडौं बाहिरबाट आएर अस्पतालमा भर्ना भएर दिनकै महँगा औषधी किनेर, जाँचहरु गरेर, होटलको खाना खाएर बिरामीको उपचार गराउनु कम्ता महँगो हुन्छ होला ? कल्पनै गर्न सकिन्न। उपचारका लागि लाखौं सकिएको, गाउँका खेत बेचिएको, घर बन्धकमा राखिएका कथाहरु सत्य कथाहरु हुन्, जसलाई परिवर्तन गर्नैपर्नेछ।
५ ) कुनै पनि रोग सानो भन्ने नहुँदोरहेछ। त्यो रोग कस्तो हो, त्यसले कत्तिको सास्ती दिन्छ भन्ने कुरा आफैंलाई बाहेक कसैलाई थाहा नहुँदो रहेछ। डाक्टरको लागि त्यो एउटा रोग वा केस हुन्छ तर बिरामीको लागि त उसको सारा शरीर नै डामाडोल भएको, संसार नै उथलपुथल भएको अवस्था हुन्छ। त्यस्तै हालत बिरामी परिवारको पनि भैरहेको हुन्छ। अझ कठिन परिस्थितिबाट त दीर्घरोग (कहिल्यै निको नहुने रोग)का बिरामी र उनका परिवारले गुज्रिनुपर्छ। नियमित डायलाइसिस गरिरहनुपर्ने मृगौलाको रोग, पक्षघात, सेरेब्रल पाल्सी जस्ता दीर्घ रोगहरुका बिरामी र उनका परिवारले भोग्नुपरेको दुःख अरुले कल्पनै गर्न सक्दैनन्। बिरामीहरुसँग कुरा गर्दा, व्यवहार गर्दा उनीहरुको धरातलमा आफूलाई उभ्याएर हेर्यो भने पनि हिजोआज देखिरहेको डाक्टरले राम्ररी हेरेन, राम्रो व्यवहार गरेन, लापरवाही गर्यो भन्ने आरोप लाग्ने अलि कम हुन्थ्यो कि ?
६ ) अरु मान्छे बिरामी हुँदा र डाक्टर बिरामी हुँदा अलि फरक अफ्ठ्यारो पर्दो रहेछ। ‘डाक्टर भएर नि बिरामी भएको तँ’ भन्दा रहेछन् मान्छेहरु । मान्छेहरुको माया भन्दा जिस्काइ पो खेप्नुपर्दोरहेछ ! हाम्रोमा डाक्टर बिरामी नै हुन्नन् भन्ने जस्तो सोच्छन् भन्या। के भन्ने खै ! अझ ‘रेसिडेन्ट डाक्टर’ भएर त सकिन्छ भने भुलेर पनि बिरामी हुनुहुदैंन ! वर्षभरिमा पाइने १४ दिने विदामा नि यति लामो बिरामी भयो भने त छुट्टी सबै सकिहाल्यो नि। त्यसमाथि ड्युटी मिलाएर मात्र बिरामी विदामा बस्न पाइने। अब बिरामी हुनुको टेन्सन त छदैंछ, ड्युटी गर्न कसलाई भन्ने होला ? ड्युटी मिल्ला कि नमिल्ला ? भन्ने टेन्सन नि लिनुपर्ने। तैपनि सहयोगी साथीहरु र डिपार्टमेन्टको कारणले खासै समस्या भने परेन। डाक्टर बिरामी हुँदा फाइदा चाहिँ के हुँदोरहेछ भने भर्ना नै हुनुपर्ने अवस्थामा पनि साथीहरुको सहयोगमा क्यानुला (रगतको नलीबाट औषधी दिन हातखुट्टामा लगाइराखिने प्लास्टिकको सुर्इ) लगाएर घरमै रगतको नसा–नलीबाट औषधी लगाइ बस्न सकिदो रहेछ। आखिर जे भएपनि अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नुभन्दा घरमै बस्नु धेरै नै सजिलो हुन्छ। यसपाली क्यानुलाबाट औषधी दिने काम मेरि आमाले नै गर्नुभयो, उहाँ मेडिकल फिल्डको त होइन तर अलिअलि सिकाएपछि खासै गाह्रों काम होइन। तर यदि तपाईं आफू कोइ एकजना मेडिकल फिल्डको हुनुहुन्न भने भुलेर पनि यस्तो प्रयास नगर्नुहोला।
आखिर चोर वा भनौं डनलाई माइक्रोबायोलोजीले नै समात्यो। रगतको कल्चरमा ‘साल्मोनेला पाराटाइफी’ देखिएपछि टाइफाइड भएको कन्फर्म भयो। रगत–ब्लड कल्चर भनेको बिरामीको ५–१० मीली रगतलाई किटाणु हुर्कनसक्ने वातावरण र मिडियामा २–३ दिन राखी कुनै खालको किटाणु हुर्कन्छ कि भनेर हेर्ने जाँच हो। यो किटाणुलाई मैले ‘काठमाण्डौंको डन’ किन भनेको भने तपाईं जुनसुकै उमेर, पद, ओहदाको हुनुहोस्, जतिसुकै धनी किन नहोस्, काठमाडौंमा बसेपछि कुनैपनि बेला यसको आक्रमणमा तपाईं पर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई भाग्यले भन्दा अरु केहीले यसबाट बचाएको छ जस्तो लाग्दैन। किनकी यहाँ पैसा तिरेर पनि तपाईंले खाने खाना, पानी सफा, ताजा र सुरक्षित छ भनेर तपाईं ढुक्क रहन सक्नुहुन्न। जोन स्नोले सन् १८५४मा (लगभग १६० वर्ष अघि) लण्डनमा देखिएको हैजाको इपीडेमिक खानेपानीमा भएको संक्रमणले हुनगएको भन्ने पत्ता लगाएर त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याएका थिए। तर, हाम्रो देशको राजधानीमा आज २१औं शताब्दीमा पनि हामीले खाने पानीमा के कति ढल मिसिएको छ ? के कति रोगका किटाणु तैरिरहेका छन् ? भगवान पशुपतिनाथलाई मात्र थाहा होला। यसको नियन्त्रण गर्ने कुरा त परै जाओस्।
अन्तत, ३० वटा (१५ ग्राम) सिटामोल, आधा फाइल फ्लेक्सन, ५ ग्राम एजिथ्रोमाइसिन र १४ ग्राम सेफ्ट्रायक्जोन, अनि मेरो यो वर्षको लगभग आधा छुट्टी खाएर बिराम सञ्चो भयो।
यस्तो बिरामी त कसैले पनि हुनुनपरोस्। सबैको भगवान पशुपतिनाथले रक्षा गरुन्, आखिर उनैले त हामी सबै नेपालीलाई बचाएका छन् !
डा समिर लामा
एक्स्काभेटर र जिपी डाक्टरहरु
मेडिकल साइन्सका केही कुरा
डाक्टर भित्रका विचित्र मानव!